Madaxweynaha Faransiiska oo ka xumaaday „ixtiraam darro lagula kacay xaaskiisa. – Xeernews24
Madaxweynaha Faransiiska oo ka xumaaday „ixtiraam darro lagula kacay xaaskiisa.
28. August 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Emmanuel Macron iyo xaaskiisa Brigitte oo 66 jir ah
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka xumaaday dhiggiisa dalka Brazil Jair Bolsonaro, isaga oo sheegay in uu si „qalafsan“ uga hadlay marwada koobaad ee dalka Faransiiska.
Qof ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha Brazil ayaa ku jeesjeesay xaaska Macron Brigitte oo 66 jir ah, iyadoo qofkaasi uu Facebook-ga soo dhigay qoraal.
Qoraalka Facebook waxaa la socday sawirka xaaska madaxweyne Bolsonaro, Michelle Bolsonaro oo 37 jir ah, kaas oo da‘ ahaan liddi ku ah midka marwada koobaad ee Faransiiska.
„Hadda waad fahmi kartaa sababta Macron uu sida xun ugula dhaqmayo Bolsonaro?“ ayuu qoraalkaasi ahaa.
Bolsonaro oo arrintaas ka falcelinaya ayaa ku hoos qoray „nin yohow waji gabax ha ku ridin…, ha ha oo uu qosol ahaan ka wado ayuu ku sii daray isaga oo luuqadda boortaqiiska adeegsanaya.
Macron ayaa la waydiiyay sida uu u arko qoraalka Bolsonaro, wuxuuna ku jawaabay „waa arrin aad u qalafsan“ oo murugo leh“.
Jair Bolsonaro iyo xaaskiisa Michelle
„Arrin xushmad darro ah ayuu ka yidhi xaaskayga. Dadka reer Brazil ixtiraam badan ayaan u hayaa, waxaa kali ah een samayn karana waa in aan u rajeeyo in ay durba helaan madaxweyne hawsha u taalla qabsada,“ ayuu yidhi Madaxweyne Macron oo ka hadlay shir jaraa’id oo uu ku qabtay kulanka dalalka G7 ee ka socda magaalada Biarritz.
Macron ayaa dabkaas ku tilmaamay „mashaakil caalami ah“ dabkaas oo dadka dhaliishan ay ku eedeeyeen Bolsonaro iyaga oo sheegay in uu ka soo horjeedo arrimaha deegaanka isla markaasna uusan wax ka qabanayn jaridda kaymaha.
Balse Bolsonaro oo dalkiisu uusan ka mid ahayn dalalka G7 ayaa Macron ku eedeeyay „in uu u fikirayo sidii gumayste“.
Hadallada laga quruxda badan yahay ee uu yidhi waxaa ka mid ahaa midkii uu ugu jawaabay xildhibaanad Maria do Rosario bishii Sabteembar ee sannadkii 2014, iyadoo baarlamaanka ay ka socotay dood kululaatay.
„Kuma kufsadeen, sababtuna waxay tahay uma qalantid,“ ayuu Bolsonaro ku yidhi Maria.
Bolsonaro ayaa sidoo kale guux dhaliyay sannadkii 2017 isaga oo meel fagaare ah ka hadlaya ayuuna soo hadal qaaday gabadha uu dhalay. Wuxuuna yidhi „Waxaan dhalay afar wiil, intaas ka dibna waan nuglaaday oo ilmihii shanaad gabadh ayuu iga noqday“.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/08/Macron-et.jpg 500 1000 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-28 08:37:422019-08-28 08:37:42Madaxweynaha Faransiiska oo ka xumaaday "ixtiraam darro lagula kacay xaaskiisa.
Taliyihii ugu da’da yaraa ee ciidanka Xoogga dalka oo xilka la wareegay ... Open letter to,